Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.4.2 Non-mety santionany: weighting
Amin'ny tsy mety santionany, vato dia afaka manafoana fanolanana vokatry ny Nihevitra dingana santionany.
Toy izany koa fa ny mpikaroka lanjany valiny avy amin'ny mety santionany, dia afaka ihany koa ny lanjan'ny valiny avy amin'ny tsy-mety santionany. Ohatra, toy ny hafa ny CPS, sary an-tsaina fa nametraka Zavatra tsy ampy dokam-barotra eo amin'ny an'arivony ny vohikala handray mpandray anjara noho ny fanadihadiana ny Tombanan'ny ny tahan'ny tsy fananana asa. Mazava ho azy, dia ho resy lahatra ianao fa ny tsotra midika ny santionany dia ho tsara Tombanana ny tahan'ny tsy fananana asa. Ny fisalasalana angamba, satria ataonareo fa ny olona sasany dia mety mba hamita ny fanadihadiana noho ny hafa. , Ohatra, ny olona tsy mandany fotoana be dia be amin'ny aterineto no tsy dia azo inoana ny hamita ny fanadihadiana.
Hitantsika tao amin'ny fizarana farany, anefa, raha mahalala ny santionany voafidy-tahaka ny ataontsika amin'ny mety santionany-dia afaka manafoana fanolanana vokatry ny santionany dingana. Indrisy anefa, rehefa miara-miasa amin'ny tsy-mety santionany, tsy fantatsika ny fomba ny santionan no voafidy. Nefa, afaka manao tombantombana momba ny santionany dingana ary avy eo mampihatra weighting Toy izany koa. Raha toa ireo tombantombana no marina, dia ny weighting dia hanafoana ny fanolanana nateraky ny santionany dingana.
Ohatra, sary an-tsaina fa ho valin 'ny fanevany dokam-barotra, ianao nanakarama 100.000 namaly. Na izany aza, tsy mino fa namaly 100.000 ireo dia tsotra kisendrasendra santionana ny Amerikana olon-dehibe. Raha ny marina, rehefa mampitaha ny namaly ny US mponina, hitanao fa ny olona avy amin'ny firenena sasany (ohatra, New York) dia eny-mifanitsy sy ny olona avy amin'ny firenena sasany (ohatra, Alaska) eo ambany-mifanitsy. Noho izany, ny tsy fananana asa tahan'ny ny santionany dia mety ho ratsy Tombanana ny tahan'ny tsy fananana asa eo amin'ny kendrena mponina.
Ny fomba iray mba hanafoana ny nanova izay nitranga tao ny santionany dingana dia ny manendry vato ho any ny olona tsirairay; ambany vato mizana ny olona avy amin'ny fanjakana izay mihoatra-solontena ao ny santionany (ohatra, New York) dia ambony vato ny olona avy amin'ny fanjakana izay eo ambanin'ny-solontena ao ny santionany (ohatra, Alaska). More manokana, ho an'ny tsirairay ny lanjan'ny respondent Mifandray ny tahan'ny amin'ny santionany mikasika ny tahan'ny mponina ao Etazonia. Izany weighting paika atao hoe lahatsoratra-stratification, sy ny hevitra ny milanja tokony hampahatsiaro anareo ny amin'ny ohatra ao amin'ny Fizarana faha 3.4.1 izay namaly avy any Rhode Island dia nomena lanja kokoa noho ny namaly avy any Kalifornia. Post-stratification dia mitaky fa fantatrao ampy ny hametraka ny namaly ho vondrona sy hahafantatra ny ohatry ny ny kendrena mponina ao amin'ny vondrona tsirairay.
Na dia ny weighting ny santionany ny mety sy ny tsy mety santionany-dia mitovy kajy (jereo ny ara-teknika fanazavana fanampiny), dia miasa tsara amin'ny toe-javatra isan-karazany. Raha ny mpikaroka manana santionany mety tanteraka (izany hoe, tsy misy fandrakofana fahadisoana ary tsy misy tsy-valiny), dia ho hamokatra manavakavaka weighting vinavina ho an'ny toetra rehetra amin'ny toe-javatra rehetra. Zavatra tsy matanjaka ara-antoka no antony mpiaro ny mety santionany mahita toy izany tsara tarehy. Etsy an-danin'izany, weighting tsy mety ho afa-mamokatra santionany manavakavaka vinavina ho an'ny rehetra ny valin-toetra raha propensities dia mitovy ho an'ny rehetra ao amin'ny vondrona tsirairay. Amin'ny teny hafa, mieritreritra indray ny ohatra, ny fampiasana lahatsoratra-stratification dia hamokatra manavakavaka raha ny vinavinan'ny olona rehetra ao New York dia manana ny mitovy mety ny mandray anjara sy ny olona rehetra ao Alaska dia mitovy mety ny mandray anjara sy ny sisa. Io no antsoina hoe fiheverana ny homogeneous-valiny-propensities-ao-tarika ny eritreriny, ka dia Mandray anjara lehibe eo amin'ny fahafantarana raha-stratification lahatsoratra hiasa tsara amin'ny tsy mety santionany.
Indrisy anefa, eo amin'ny ohatra, ny homogeneous-valiny-propensities-ao-vondrona fiheverana toa inoana ho marina. Izany hoe, dia toa inoana fa ny olona rehetra any Alaska dia mitovy mety ho na dia nanana ny fanadihadiana. Kanefa, misy teboka telo manan-danja foana ao an-tsaina momba ny lahatsoratra-stratification, rehetra, izay mampiseho izany ho toy kokoa ny fanantenana.
Voalohany, homogeneous-valin-propensities-ao-vondrona fiheverana lasa Mitombina kokoa tahaka ny isan'ny vondrona mitombo. Ary, ny mpikaroka dia tsy voafetra ho vondrona fotsiny mifototra amin'ny lafiny toerana iray. Ohatra, afaka mamorona vondrona mifototra amin'ny fanjakana, taona, firaisana ara-nofo, sy ny fari-pahaizana. Toa Mitombina kokoa fa misy valinteny homogeneous propensities ao anatin'ny vondrona 18-29, vehivavy, kolejy nahazo diplaoma monina any Alaska noho ny ao anatin'ny gropy ny olona rehetra monina any Alaska. Noho izany, araka ny isan'ny vondrona ampiasaina ho an'ny lahatsoratra-stratification mitombo, ny tombantombana ilaina mba hanohanana ny ho tonga bebe kokoa ny antonony. Noho izany zava-misy, dia toa toy ny mpikaroka fa te-hanangana ny be ho an'ny maro ny vondrona lahatsoratra-stratification. Saingy, tahaka ny isan'ny vondrona mitombo, mpikaroka mankamin'ny hafa olana: angon-drakitra sparsity. Raha misy afa-tsy vitsy ny olona ao amin'ny vondrona tsirairay, dia ny vinavina dia ho azo antoka kokoa, ary ao ny tafahoatra raharaha izay misy ny vondrona tsy misy namaly, dia post-stratification mizara tanteraka. Misy fomba roa avy tany ity fifanenjanana raiki-tampisaka eo amin'ny plausibility ny homogeneous- valin-propensity-ao-tarika ny eritreriny sy ny fangatahana ho an'ny mahay mandanjalanja santionany habe amin'ny vondrona tsirairay. Fomba iray dia ny hifindra tany kokoa noho ny fitaovana antontan'isa modely fikajiana vato ary ny iray hafa dia ny hanangona lehibe kokoa, kokoa santionany hafa, izay manampy antoka mandanjalanja santionany habe amin'ny vondrona tsirairay. Ary, indraindray mpikaroka manao roa, araka izay aho milaza amin'ny an-tsipiriany eto ambany.
Faharoa, fiheverana, rehefa miara-miasa amin'ny lahatsoratra-stratification avy amin'ny tsy-mety santionany dia ny homogeneous-valiny-propensity-ao-vondrona fiheverana efa matetika atao rehefa mety santionany fandinihana. Ny antony fiheverana fa io no ilaina fa mety santionany amin'ny fampiharana dia ny hoe mety tsy santionany manana valiny, sy ny fomba mahazatra indrindra noho ny fanitsiana ny tsy valinteny dia Lahatsoratra-stratification araka ny voalaza etsy ambony. Mazava ho azy, satria maro ny mpikaroka sasany manao ny eritreriny dia tsy midika fa tokony hanao izany koa. Nefa, izany no midika fa rehefa mampitaha ny tsy mety santionany ny mety santionany amin'ny fomba fanao, dia tsy maintsy ao an-tsaina foana fa samy miankina amin'ny tombantombana sy ny vondrona fanampiny vaovao mba hampisy vinavina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra zava-misy, tsy misy tsotra izao tsy misy eritreretina-manatona inference.
Farany, raha miahy Tombanana no tena-in ny tahan'ny tsy fananana asa ohatra-dia mila toe-malemy kokoa noho ny homogeneous-valinteny-propensity-ao-tarika vinavina. Manokana, tsy mila mihevitra fa ny olona rehetra dia mitovy valin-propensity, ianao ihany no mila mieritreritra fa tsy misy fifandraisany eo amin'ny valin propensity sy ny tahan'ny tsy fananana asa ao anatin'ny vondrona tsirairay. Mazava ho azy, na dia malemy kokoa io toe-javatra dia tsy mihazona amin'ny toe-javatra sasany. Ohatra, sary an-tsaina estimating ny ohatry ny Amerikana izay manao asa an-tsitrapo. Raha ny olona izay manao asa an-tsitrapo dia mety mba hanaiky ho amin'ny fanadihadiana, dia mpikaroka dia amin'ny fomba mahery-Tombanan'ny ny habetsaky ny an-tsitrapo, na dia manao lahatsoratra-stratification fanitsiana, vokatr'izany izay efa nampiseho empirically amin'ny Abraham, Helms, and Presser (2009) .
Araka izay nolazaiko teo aloha, tsy mety santionany dia jerena amin'ny fisalasalana lehibe amin'ny mpahay siansa ara-tsosialy, amin'ny ampahany noho ny anjara asany eo amin'ny sasany amin'ireo mahamenatra indrindra tsy fahombiazana tany am-piandohan ny fanadihadiana fikarohana. Ohatra mazava hoe hatraiza no tonga tamin'ny tsy mety santionany dia ny fikarohana ny Wei Wang, David Rothschild, Sharad Goel, sy Andrew Gelman izay tsara dia azony indray ny vokatry ny 2012 US fifidianana mampiasa ny tsy mety santionany ny American Xbox mpampiasa -a manapa-kevitra tsy kisendrasendra santionany ny Amerikana (Wang et al. 2015) . Ny mpikaroka nanakarama namaly avy amin'ny Xbox lalao rafitra, ary araka izay mety manantena, ny Xbox santionany skewed lahy sy skewed tanora: 18 - 29 taona ankizy ho ny 19% ny mpifidy, fa 65% ny Xbox santionany sy ny olona manao ny 47% ny mpifidy sy ny 93% ny Xbox santionany (Sary 3.4). Noho ireo isan'ny mponina mafy mifanavakavaka, ny manta Xbox antontan-kevitra dia mahantra famantarana ny fifidianana miverina. Izany fandresena mialoha mafy ho an'ny Mitt Romney ny Barack Obama. Ary koa, izany no ohatra iray hafa avy ny loza ateraky ny manta, unadjusted tsy mety santionany ary mampahatsiahy ny asa soratra Digest nandamoka.
Sary 3.4: Mponina ny namaly in Wang et al. (2015) . Satria namaly no nanakarama avy Xbox, izy ireo kokoa ny ho tanora, ary azo inoana kokoa ho lehilahy, momba ny mpifidy amin'ny fifidianana amin'ny 2012.
Na izany aza, Wang sy ny mpiara-miasa dia mahafantatra ireo olana sy niezaka ny lanja ny namaly mba hanitsiana ny santionany dingana. Indrindra indrindra, dia nampiasa be pitsiny kokoa ny lahatsoratra amin'ny teny-stratification efa nolazaiko anareo momba. Ilaina ny mianatra bebe kokoa momba ny fomba satria manorina zavatra manindry mandry momba ny lahatsoratra-stratification, ary ny manokana sy ny mpiara-miasa aminy dikan-Wang ampiasaina no iray amin'ireo mahafinaritra indrindra manakaiky ny weighting tsy mety santionany.
Ao amin'ny ohatra tsotra momba ny estimating tsy fisian'ny asa ao amin'ny Fizarana faha 3.4.1, dia nizara ho vondrona ny mponina mifototra amin'ny toe-ponenana. Mifanohitra amin'izany kosa, Wang sy ny mpiara-miasa nizara ny mponina any ho 176.256 vondrona voafaritra amin'ny alalan'ny: lahy sy ny vavy (2 sokajy), hazakazaka (4 sokajy), taona (4 sokajy), ny fanabeazana (4 sokajy), fanjakana (51 sokajy), antoko ID (3 sokajy), ny firehan-kevitra (3 sokajy) ary 2008 hifidy (3 sokajy). Mihoatra vondrona, ny mpikaroka nanantena fa mety ho azo inoana kokoa fa ao anatin'ny vondrona tsirairay, valin propensity dia uncorrelated amin'ny fanohanana an'i Obama. Manaraka, fa tsy fananganana ambaratonga tsirairay-vato, tahaka izay efa nataontsika amin'ny ohatra, Wang sy ny mpiara-miasa nampiasa sarotra modely ho Tombanan'ny ny ohatry ny olona ao amin'ny vondrona tsirairay izay hifidy ny Obama. Farany, dia mitambatra vondrona ireo vinavina ny fanohanana ny fantatra habe ny ny vondrona tsirairay hamokatra Tombanana ho fari-fanohanana ankapobeny. Amin'ny teny hafa, dia voatetika ny mponina ho vondrona isan-karazany, tombanana ny fanohanana Obama in ny vondrona tsirairay, ary avy eo dia naka zavatra mavesa-eo ho eo ny vondrona vinavina hamokatra ny ankapobeny tombana.
Noho izany, ny zava-tsarotra lehibe ny fomba dia ny Tombanan'ny ny fanohanana an'i Obama any tsirairay amin'ireo vondrona 176.256. Na dia ny tontonana 345.858 ahitana manam-paharoa mpandray anjara, lehibe maro araka ny fitsipika ny fifidianana biraom-pifidianana, nisy maro, vondrona maro izay Wang sy ny mpiara-miasa nanana saika tsy namaly. Noho izany, mba Tombanan'ny ny fanohanana ao amin'ny vondrona tsirairay dia nampiasa teknika antsoina hoe multilevel ny fihemoran'ny amin'ny lahatsoratra-stratification, izay mpikaroka-pitiavana hoe Mr. P. Ny tena, mba Tombanan'ny ny fanohanany an'i Obama ao anatin'ny vondrona manokana, Atoa P. dobo vaovao avy amin'ny maro mifandray akaiky amin'ny vondrona. Diniho, ohatra, ny zava-tsarotra ny estimating ny fanohanany an'i Obama amin'ny vehivavy, Hispanics, teo anelanelan'ny 18-29 taona, izay nahazo diplaoma oniversite, izay voasoratra anarana Demokraty, izay tena hamantarana toy ny moderates, ary izay nifidy an'i Obama tamin'ny 2008. Izao dia tena, tena vondrona manokana, ary azo atao fa misy ny tsy misy olona ao amin'ny santionany amin'izany toetra. Noho izany, mba ho vinavinan'ny momba ity vondrona ity, Atoa P. dobo miaraka vinavinan'ny avy amin'ny olona ao amin'ny vondrona tena mitovy.
Mampiasa io tetik'ady fanadihadiana, Wang sy ny mpiara-miasa dia afaka mampiasa ny Xbox tsy mety santionany mba tena akaiky ny ankapobeny Tombanan'ny fanohanana izay Obama nandray tao amin'ny 2012 ny fifidianana (Sary 3.5). Raha ny marina ny vinavina dia marina kokoa noho ny aggregate ny hevi-bahoaka fifidianana. Araka izany, amin'ity tranga ity, weighting-mazava Mr. P.-toa mba hanao asa tsara manitsy ny mifanavakavaka amin'ny akora tsy mety; mifanavakavaka izay hita maso rehefa mijery ny tombatombana avy amin'ny unadjusted Xbox angona.
Sary 3.5: Estimates avy Wang et al. (2015) . Unadjusted Xbox santionany vokatra tsy marina vinavina. Fa, ny zavatra mavesa-Xbox namoaka santionany vinavina izay marina kokoa noho ny eo ho eo ny mety fanadihadiana ara-telefaonina.
Misy lesona lehibe roa avy amin'ny fianarana ny Wang sy ny mpiara-miasa aminy. Voalohany, unadjusted tsy mety santionany dia afaka mitarika amin'ny ratsy vinavina; izany no lesona mpikaroka fa maro ny efa renareo fahiny. Na izany aza, ny lesona faharoa dia ny hoe tsy mety santionany, raha araka ny tokony ho mavesa, afaka mamokatra tena tsara raha ny marina vinavina. Raha ny marina, ny vinavina dia marina kokoa noho ny vinavina avy amin'ny pollster.com, ny aggregation ny fomba nentin-drazana fifidianana fitsapan-kevitra.
Farany, dia misy zava-dehibe voafetra ny zavatra azontsika ianarana avy amin'ny fandinihana manokana ity iray ity. Satria stratification lahatsoratra-niasa tsara amin'ny tranga manokana ity, tsy misy antoka fa ho miasa tsara amin'ny tranga hafa. Raha ny marina, ny fifidianana dia angamba iray amin'ireo toe-javatra mora indrindra, satria efa nianatra pollsters fifidianana ho efa 100 taona, misy tsy tapaka feedback (afaka mahita izay mandresy amin'ny fifidianana), sy ny famantarana sy ny isan'ny mponina antoko toetra dia somary vinavina ny fifidianana. Tamin'izay fotoana izay, dia tsy mafy orina sy empirical traikefa teoria hahafantatra rehefa weighting fanovana ho tsy mety santionany dia hamokatra ampy vinavina marina. Zavatra iray izay mazava, na izany aza, dia raha terena hiasa amin'ny tsy-mety santionany, dia misy antony mahery mba hino fa fanitsiana vinavina dia ho tsara kokoa noho ny tsy nanitsy vinavina.